Wararka - Farqiga u gaarka ah maaskarada caafimaadka, N95 iyo maaskarada KN95
Farqiga u gaarka ah maaskarada caafimaadka, N95 iyo KN95 maaskaro
Dhawaan, dhammaantayo waxaan iibsaneynaa waji dabool. Waxaan ku soo uruurinay xoogaa macluumaad ah halkan
Farqiga u dhexeeya maaskarada difaaca caafimaadka, maaskaro N95 iyo maaskarada 'KN95'
1. Maaskarada difaaca caafimaadka: iyadoo la jaan qaadayo Shiinaha GB 19083-2010 heerka qasabka ah, waxtarka sifaynta ≥ 95% (oo lagu tijaabiyay waxyaabo aan saliid lahayn). Waxaa loo baahan yahay inay ka gudubto baaritaanka dhiiga dardaro ee dhiigga (ka hortag dheecaanka jirka) iyo in lala kulmo tilmaamayaasha microbial.
2. Maaskaro N95: Shahaadada NIOSH, waxtarka sifeynta walxaha aan saliida lahayn ≥ 95%.
3. Maaskarada 'KN95': la kulan heerka caadiga ah ee GB 2626, iyo waxtarka kala-miirista walxaha aan saliida lahayn ayaa ka badan ama u dhigma 95%.
Sida sida laba digir, saddexda heer ee kor ku xusan ee hababka tijaabada waxtarka maaskaro waa isku mid. Sidaa darteed, heerka waxtarka filtarku waa mid iswaafaqsan.
Sidaa darteed, waxaan iibsannaa NIOSH N95 iyo GB2626-2006 waji-xirmooyinka KN95 waa isku mid. Furaha xirashada maaskaro waa in lagu xiro wajiga, yacni, hawo la'aan hawo! Fadlan si taxaddar leh u akhri tilmaamaha intaadan xirin.
“Heerarka aasaasiga ah ee waji-soo-saarka warshadaha iyo maaskarada alaabada macaamiisha waa isku mid. KN95 oo ah heerka GB2626 waa caadi, KN90-na waa ku filan tahay xaqiiqda. Kaliya markii shaqaalaha caafimaadku leeyihiin dheecaanka jirka ee jirka ku faafaya, iyo marka u fiirsashada deegaanku ay aad u sarreyso, waxay u baahan tahay inay ahaato mid aad u adag. Laakiin waa in la ogaadaa in xiddigaha qaarkood ay qurux badan yihiin isla maaskaro, laakiin aan loo eegin saameynta ilaalinta. Farsamo yaqaanada 3M ee kor ku xusan waxay u sheegeen wariyaha dhaqaalaha ee qarniga 21aad.
Marka laga hadlayo soo noqnoqoshada waji-beddelka, farsamayaqaannada aan kor ku soo xusnay waxay sheegeen in haddii ay wasakh yihiin oo ay jabaan, ay ku beddelayaan saddex illaa shan maalmood gudahood, ama haddii shaqaalaha caafimaadku tagaan aagga ay sumeysan yihiin, ay iyagu beddelayaan.
Xaqiiqdii, ma jiro gabagabo cad oo ku saabsan waqtiga ugu wanaagsan ee la xidho ee wajiyada N95 ee dalalka shisheeye, oo ay ku jiraan cidda, mana jiro sharci ku habboon oo ku saabsan waqtiga isticmaalka maaskarada N95 ee Shiinaha. Baarayaasha qaarkood waxay sameeyeen cilmi baaris ku haboon oo ku saabsan waxtarka ilaalinta iyo xirashada waqtiga maaskaro ilaalinta caafimaadka ee N95. Natiijooyinka waxay muujinayaan in ka dib markaad xirato maaskaro N95 muddo 2 maalmood ah, waxtarka miiraha ayaa weli ka sarreeya 95%, iyo caabbinta neefsashada ayaa wax yar iska beddeleysa; waxtarka sifeynta waxay hoos u dhigeysaa 94.7% kadib markaad xirato N95 maaskaro ilaalin caafimaad 3 maalmood.
Si kastaba ha noqotee, maaskarada waa in la beddelaa waqtiga haddii ay dhacaan xaaladaha soo socda:
1. Caqabadaha neefsashada ayaa si aad ah u kordhay;
2. Maaskarada ayaa dhaawacan ama dhaawacantay;
3. Marka maaskaro aysan wajiga si adag u wajihi karin;
4. Maaskarada waa wasakhaysay (sida dheecaanka dhiigga ama dhibcaha iyo arrimaha kale ee shisheeye);
5. Waxaa loo isticmaalay qayb gaar ah ama taabashada bukaanka (maxaa yeelay maaskaro ayaa wasakhaysay);
6. Haddii maaskaro ay ku jirto kaarboon firfircoon, maaskaro ayaa ur ku jirta.
Intaa waxaa dheer, qodobbada soo socda waa in fiiro gaar ah loo yeesho marka la xidhayo maaskarada
1. Dhaq gacmaha ka hor intaadan xiro maaskaro, ama iska ilaali inaad taabato dhinaca gudaha ee maaskaro intaad xiran tahay maaskarada, si loo yareeyo suurtagalnimada sumowga maaskarada.
2. Kala saar gudaha iyo dibedda, kor iyo hoos maaskaro. Dhinaca midabka iftiinku waa gudaha waana inuu ku dhawaadaa afka iyo sanka, dhinaca gudcurka ahna waa inuu u jeedaa dibedda; dhamaadka birta birta waa dusha maaskaro.
3. Weligaa ha ku cadaadin maaskaro gacmahaaga, oo ay ku jiraan maaskaro N95. Waxaad kaliya ku go'doomin kartaa fayraska dusha maaskaro. Haddii aad ku maroojiso maaskaro gacantaada, fayrasku wuxuu ku qoyn doonaa buufinta, waxaana laga yaabaa inaad qaadsiiso fayraska.
4. Hubso in maaskarada ay si fiican ula jaanqaadayso wejiga. Qaabka tijaabada ee ugu fudud ayaa ah: ka dib markaad xirto maaskaro, si adag u neefso, hawaduna kama soo bixi karto cirifka maaskarada.
Markaad iibsaneyso maaskaro, waxaad marka hore eegi kartaa astaanta moodeelka xirmada kore. Qodobka ugu dambeeya ee muhiimka ah ee xirashada maaskaro waa mid aad muhiim u ah. Ma aha oo kaliya caddaan laakiin sidoo kale caddaan!
Waqtiga boostada: Oct-15-2020